डाक्टरको लापरवाहीले गर्भवतीको मृत्यु, डाक्टर साह फरार – Setosurya
डाक्टरको लापरवाहीले एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ। सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर दीलिप साहको लापरबाहीका कारण अस्पतालमा गर्भवती विरामी महिलाको मृत्यु भएको पीडितका आफन्तले आरोप लगाउँदै नाराजुलुस गरेका छन्। राजविराजमा पीडितका आफन्तले आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन्। अन्दोलनले अस्पतालको अवस्था तनावग्रस्त भएको छ।
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका १ पिप्राहिकी २५ वर्षीया अनिता यादवलाई २ दिनअघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । सुरुदेखि नै चेकजाँच गर्दै आएका डाक्टर दीलिप साहले नै अनितालाई अस्पताल भर्ना गर्न सल्लाह दिएका थिए । तर, व्यथा चर्किंदै गएपछि डाक्टरले वास्ता नगरेको मृतकका पति रमेश यादवले आरोप लगाए ।
अनितालाई बुधबार राति १० बजेदेखि नै दुखाइ बढेपछि आफूले पटकपटक फोन गर्दासमेत डाक्टरले फोन नउठाएको यादवले बताए । अस्पतालले पनि सहयोग नगर्दा आफ्नी पत्नी र बच्चा दुवैको मृत्यु भएको उनको भनाइ छ ।बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि राति २ बजे आइपुगेका डाक्टर साह तक्कालै भागेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् ।
बत्यस्तै घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन भएको छ। वास्तविकता पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यिय छानबिन समिति गठन भएको छ ।
डिमुवामा २ दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर संचालन
यस्ता छन् शाकाहारी हुनुका १० फाइदा
दशैंमा मासु र मदिरा कति खाने ? बरिस्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईले दिएको सल्लाह यस्तो छ :
अाेली र प्रचण्डबीच भयाे यस्ताे गाेप्य सहमती, गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलार्इ पदबाट हटाउन दुबै राजी…………..
सिंहदरबारका महाराज भन्दै पोखरामा भेला भएर मुख्यमन्त्रीहरूले गरे अाफ्नै सरकारकाे विरोध! हेर्नुहाेस् कसले के भने?